IDomingo Villar. "Ndisoloko ndinomdla wolwandle" | Uncwadi lwangoku
Ukufota: (c) UMariola Díaz-Cano. Ndikunye neDillingo Villar. NgoJanuwari 2020.
ukuba I-Domingo Villar bubuthathaka Ochwetheza le migca yimfihlo evulekileyo, kwaye akukho namnye ukuba ungumthengi rhoqo wale bhlog apho kukho amanqaku ambalwa ngaye kunye neencwadi zakhe. Ndinethamsanqa lokudibana naye, ndambulisa ngezihlandlo eziliqela Kwaye ndiqinisekisile ukuba ukulula njengomntu uhamba ngesandla kunye netalente yakhe enkulu njengombhali.
Namhlanje ndizinika isipho sokuzalwa kunye nale nto udliwano ndlebe ukuba uDomingo wayenobubele ngokwaneleyo ukuba angandinika kwinyanga ephelileyo. Enkosi ngexesha lakho kunye nokuzinikezela kuncinci. Yintoni abafundi abaninzi abayixabisayo ngokwenene kukuba sizinikezele U-Leo Caldas kunye noRafa Estévez, kwaye uyonwabele ilizwi leprozi elikhethekileyo njengelakho. AmaGracian Yonke into, ngeCawa.
Uzalelwe ngaphakathi Vigo, Kodwa ukuhlala eMadrid, uDomingo Villar unomnye wabo iwonga eyodwa kwinoveli yolwaphulo-mthetho lwesiSpanish lwangoku kuphela Izihloko ezingama-3 ipapashiwe: Amehlo amanzi, Ulwandle lwarhaxwa y Inqanawa yokugqibela. Kodwa uyaqonda xa ufumanisa Abalinganiswa ababini abangenakuphindwa: umhloli ovela eVigo U-Leo Caldas nomncedisi wakhe Aragonese URafael Estevez. Kwaye uye kwimizekelo enje ngeenxa zonke kwaye uchumise ichweba laseVigo.
Kwakhona, iprozi engaqhelekanga ukuba ufunda ngokungathi uhamba ngenqanawa kwenye yeenqanawa ezinqumla loo chweba ukusuka elunxwemeni ukuya elunxwemeni phakathi kwayo nayiphi na iidolophu zayo, ii-coves, iilwandle kunye neekona ezifihliweyo ezizele bubuhle. Kukho kwakhona ulwaphulo-mthethoEwe kunjalo uphando, kodwa ngaphezulu kwazo zonke kukho izitokhwe yoonobumba bayo kunye mzobo ngakumbi isiGalician kunye nokukhuthaza ngakumbi.
Omnye ukudibana kwezinto ezichukumisayo ezenza i Indlela yokubalisa UDomingo Villar unayo kwaye unikwe a Umsebenzi ophumelele ngokuthembekileyo ngabafundi abaninzi abamlandelayo ngokuzinikela. Ukuba sikwazile ukunyamezela iminyaka elishumi kwinoveli yakhe yokugqibela kwaye siza kulinda into ethatha elandelayo.
UDLIWANO-NDLEBE NEVILLAR YASEKHAYA
I-DOMINGO VILLAR: Andiqinisekanga ngencwadi yokuqala endiyifundileyo, kodwa Ibali lokuqala endilibhalileyo okanye ubuncinci eyokuqala endiyikhumbulayo inkunzi yenkomo enesihloko Indawo yasentlango.
I-DV: Isiqithi sobuncwanenguStevenson. Ndisoloko ndiziva umtsalane elwandle. Njengomntwana, ndabona ichweba elivela kwifestile yam kwaye ndicinga ukuba uJim Hawkins waziva ngathi ngumntu osondele kakhulu.
AL: Ababhali bakho obathandayo? Unokukhetha kuwo onke amaxesha.
I-DV: URobert Louis Stevenson, UDennis Lehane, UYohane Irving, UCormac McCarthy, uCamilleri, UMunoz Molina, UMarsé, iTorrente, BarojaUGarcia Marquez, uCarlos Oroza, uLeopoldo Maria Panero, uJoaquin Sabina...
I-DV: Kwipirate Ixesha elide ngu-John, oyena mkhwenyana uyathandeka kuncwadi.
AL: Nawuphi na umkhwa okanye i-mania xa kuziwa ekubhaleni nasekufundeni?
I-DV: U-Leo ulele, ngaphakathi cwaka, esofeni okanye ebhedini. Ndibhala kunye umculo uthambile, tshokoleji y coffee.
I-DV: Ndikhetha ukubhala ukusuka i-noche, xa kuthe cwaka endlini. Ndihlala ndizibeka kwi itafile yesidlo sangokuhlwa, ndingayandisa phi eyam amanqaku kunye neencwadana.
AL: Zeziphi iintlobo zoncwadi ozithandayo?
I-DV: Inkqubo ye Imibongo kunye inoveli emnyama.
I-DV: UAndrea UCamilleri, IVázquez Montalban, Torrente Ballester, Lorenzo silva...
AL: Ufunda ntoni ngoku? Ukuzonwabisa okanye njengamaxwebhu?
DV: Ndingu Ndizifundela uxwebhu kwaye uzame ukuhlala kakuhle kwincwadi yam elandelayo.
KWI: Ukubhala? Mhlawumbi inoveli yesine yoMhloli uCaldas?
I-DV: Ndikulo, ewe, ukuthatha amanqaku, ukuzama ukuzoba ibali ... bendifuna ukuba ndichithe iiveki ezininzi kule ntwasahlobo eGalicia ukunyathela kunye nokujoja indawo apho ndiza kubeka khona incwadi, kodwa uCovid-19 unezinye izicwangciso.
DV: Ndicinga akuzange kube lula ukupapasha. IAmazon inika ithuba lokuzipapasha kwaye baninzi abapapashi "beentlanzi" kuloo mhlaba wokuloba. Ingxaki yenye: siphelelwa ngabafundi. Ukufunda ngumsebenzi omangalisayo, kodwa kufuna umzamo wokucinga ukuba bambalwa kwaye bambalwa abantu abazimiseleyo. Siyayeka ukuba ngabadlali ukuba babe ngababukeli nje.
I-DV: Ndibona phantse akukho nto intle kuyo yonke le ngxaki. Ekuqaleni kwakubonakala ngathi akuyonyaniso kangangokuba kangangeeveki ndingakwazi ukubhala okanye ukufunda. Kwaye ndiyazi ukuba khange yenzeke kum ndedwa. Kutheni le nto intsomi ukuba inoveli yayisijikelezile?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » IDomingo Villar. "Bendi soloko ndinomdla wolwandle"